Chọpụta nkọwa nke ọdụ ụgbọ elu Copenhagen | Akụkọ Njem
Ọdụ ụgbọ elu Copenhagen
Susana Garcia | | Ụlọ elu, Copenhague, General
Copenhagen bụ isi obodo Denmark na otu n’ime obodo ndị kachasị mkpa na Europe. Obodo a mara mma na-anabata ọtụtụ narị ndị ọbịa na ọdụ ụgbọ elu ya kwa ọnwa ma n'ihi nke a ọ bụ isi nke nnukwu mmasị. Ọ bụrụ na nke a bụ otu n’ime nleta gị ọzọ, rịba ama ihe ọmụma gbasara obodo na ọdụ ụgbọ elu.
Iji gaa obodo a na ọ ka mma ka doo anya banyere ozi gbasara ọdụ ụgbọ elu gị, oge mbata na mbata nke ọtụtụ puku mmadụ na-esi na ya agafe. Na mgbakwunye, anyị ga-ahụ ụfọdụ ebe ndị nwere mmasị na obodo iji nwee ike ịga njem njegharị.
1 Copenhagen njem obodo
2 Ọdụ ụgbọelu dị na Copenhagen
3 Ọdụ ụgbọ elu Kastrup
4 Ọdụ ụgbọ elu Roskilde
Copenhagen njem obodo
Obodo Copenhagen bụ nnukwu obodo nwere ọtụtụ ihe mmasị. Ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ ma ọ bụ Nyhavn, nke bụ ọwa mmiri kachasị ama n’obodo ahụ, nke e wuru na narị afọ nke iri na asaa. Ihe osise nke obere Mermaid, nke sitere na akụkọ nke Hans Christian Andersen, ghọrọ otu n'ime akara obodo. Ikwesiri ịga leta obodo nweere onwe ya, nke a na-ahụta na mpụga Denmark. Rosenborg Castle bụ ụlọ mara mma nke narị afọ nke XNUMX mara mma nke nwere ubi mara mma ma enwekwara Churchka San Salvador. Ọ bụrụ na ọ na-atọ anyị ụtọ, anyị ga-akwụsị na Tivoli Gardens, yana otu n'ime ogige ntụrụndụ kacha ochie n'ụwa.
Ọdụ ụgbọelu dị na Copenhagen
Na nso obodo ahụ ọ ga-ekwe omume iru ọdụ ụgbọ elu abụọ na-eje ozi na mpaghara a. N'otu aka anyị nwere ọdụ ụgbọ elu Kastrup, nke bụ otu n'ime ndị kasị ibu na Europe, na-eje ozi a nnukwu ebe ke edem edere Europe. N'aka nke ọzọ, e mepụtala nke kacha ọhụrụ, nke nke Roskilde, nke na-enyere aka belata ibu nke ọdụ ụgbọ elu obodo ahụ. Ndị a bụ ohere abụọ anyị nwere mgbe anyị na-efega Copenhagen.
Ọdụ ụgbọ elu Kastrup
Ọdụ ụgbọ elu Kastrup bụ ihe kachasị mkpa na Denmark niile na otu n’ime ndị kacha ekwo ekwo n’usoro nke ịzụ ahịa na mpaghara ugwu ugwu Europe. Ọ bụkwa nke kacha ochie n’obodo ahụ, ebe ewubere ya n’afọ 1925. N’ọdụ ụgbọ elu e nwere ọdụ atọ, nke ọrụ bọs na-ejikọ iji mee ka ọ dịrị ndị njem mfe ịdị na-aga ibe ha. Ọrụ a bụ n'efu, ka anyị wee si n'otu ebe kwaga ebe ọzọ na-akwụghị ụgwọ.
Ọdụ a na-arụ ọrụ kachasị na ụlọ ọrụ Sistemụ Airlinesgbọelu Scandinavian. Agbanyeghị, enwerekwa ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka Lufthansa, Finnair ma ọ bụ Danishair. Ọ nwere ọtụtụ mba ị na-aga ebe dịka Canada ma ọ bụ United States. Ha nwekwara ebe dịgasị iche iche nke Europe, dịka Berlin, Vienna ma ọ bụ Helsinki, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
A chọtala ya emi odude ke isuo Amager, dị kilomita 8 site na etiti obodo. Agwaetiti a jikọtara na etiti Copenhagen site na àkwà mmiri, na-eme ka ọ dịrị ya mfe isi na ọdụ ụgbọ elu. E bidoro ọdụ ụgbọ elu ya na ọdụ ya na 1925, ịbụ otu n'ime ọdụ ụgbọelu mbụ na Europe. Edebanyela aha 6.000 na 1932. N'ime afọ isii ka e mepere ọdụ nke abụọ na asatọ nke e mepụtara ebe a na-adọba ụgbọala. Ugbua na 98 ka emepere ọdụ nke atọ, nweta atọ nke dị taa.
Airportgbọ elu a nwere ọtụtụ ọrụ na-enyere ndị njem na-etinye ọtụtụ awa na ya aka. O nwere otutu ụlọ oriri na ọ foodụ fastụ ngwa ngwa na ebe a na-ere ihe ọesụesụ nwee ike iri nri na ọdụ. O nwekwara ọfịs na ebe nzukọ ma ọ bụ ime ọgbakọ maka ndị na-aga ahịa. N’otu ọdụ ụgbọ elu ahụ enwere ụlọ nkwari akụ, nkwari akụ ,lọ oriri na ọ Transferụ ,ụ, nke nwere nnweta nnweta na njedebe ma nwee ike ịbụ ebe dị mma iji rahụ n’abalị ma ọ bụrụ na ị kwụsị n’ọdụ ụgbọ elu. N'otu aka ahụ, ndị njem ga-enwe ike ịchọta ụlọ ahịa, isi ihe ọmụma na mgbazinye ụgbọ ala. N'ime akụrụngwa ị nwere ike ịchọta ATM ma ha nwekwara Wi-Fi Nweta Internetntanetị.
Iji rute n'ọdụ ụgbọ elu a ị nwere ike jiri njem dị iche iche. The nwere ike were bọs dị ọtụtụ site na ọdụ ụgbọ ala, dị ka nọmba 5A, nke na-aga n'etiti obodo. Enwekwara ike ijide ụgbọ oloko na 3, na-ahọrọ tiketi ahụ dabere na mpaghara obodo ị na-aga. Enwekwara ike ịga metro. Nhọrọ ọzọ bụ ịgbazite ụgbọ ma ọ bụ jiri tagzi, ọ bụ ezie na nhọrọ dị ọnụ ala karịa niile bụ bọs ma ọ bụ metro.
Ọdụ ụgbọ elu Roskilde
Ọdụ ụgbọ elu a dị kilomita asaa site na Roskilde. Ọ dị ọkara otu awa site na etiti ya, ọ dịkwa obere ọdụ ụgbọ elu na nso nso a. Ka ọ dị ugbu a, ọrụ ya bụ nke ụgbọ elu mpaghara, tagzi ụgbọ elu ma ọ bụ nke ije ozi dị ka ebe maka ọrụ ụgbọ elu, n'agbanyeghị na a na-amụ banyere ohere ịnye ya ụfọdụ ụgbọ elu dị ala ma ọ bụ ụgbọelu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ọdụ ụgbọ elu Copenhagen
Ayamonte, n'ụkwụ osimiri ahụ